Al-Shabaab oo laga qabsaday Qansax-dheere iyo Buur-hakabo oo Ciidammada dawladdu Qarka u saaran yihiin | Berberanews.com
Home WARARKA Al-Shabaab oo laga qabsaday Qansax-dheere iyo Buur-hakabo oo Ciidammada dawladdu Qarka u...
Al-Shabaab oo laga qabsaday Qansax-dheere iyo Buur-hakabo oo Ciidammada dawladdu Qarka u saaran yihiin
Baydhabo-(Berberanews)- Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda KMG ah ee Soomaaliya ay qabsadeen maanta magaalada Qansax Dheere.
Qabsashada magaalada ayaa ka danbeysay kadib markii dagaal uu labada dhinac ku dhexmaray meel ka baxsan magaalada, kaasi oo la sheegay in khasaaro uu geystay. Wararku waxa kale oo ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ay u soo dhaqaaqeen dhinaca magaalada Buur Hakaba, iyaga oo soo dhaafay Deynuunaay.
Saraakiisha dowladda ayaa ku waragaliyay dadka shacabka ah inay is dejiyaan oo ay la shaqeeyaan Ciidamada ammaanka, waxaana ay ugu baaqeen inay soo sheegaan goobaha ay ku dhuumaalaysanayaan Al-Shabaabku.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca Kooxda Al-Shabaab, iyadoo xaaladda degmooyinkaasi wali ay kacsan tahay maaddaama mar walba halkaasi laga filan karo dagaallo dhex mara dhinacyada Al-Shabaab iyo Ciidammada dawladda Ku-meel-gaadhka oo kaa shanaya kuwa Itoobiya.
Magaalada Qansax Dheere ayaa ah magaalo muhiim ah oo isku xidha gobollada Bay, Gedo iyo Shabeellada Hoose.
Previous articleWeriye Ma tihide war-xun sheeg baad tahay
Next articleMadaxwaynihii Waddanka Malawi oo geeriyooday